मोबाइलमा ब्याट्रीको चार्ज नटिकेर हैरान हुनुभएको छ ? | NepalDainik
मोबाइलमा ब्याट्रीको चार्ज नटिकेर हैरान हुनुभएको छ ?
Published: Wednesday, March 1, 2017
मोबाइलमा धेरै समय ब्याट्री नटिकेर हैरानु हुनु भएकै होला । अझ लोडसेडिङ भइरहने ठाउँमा त ब्याट्रीको चार्ज लामो समयसम्म टिक्दैनन् । कतिबेला लाइन आउला र चार्ज गर्न पाइएला भनेर बस्नु पर्ने बाध्यता त छँदैछ ।
विभिन्न कामले बाहिर हिँडिरहनु पर्ने र चाहिएको समयमा मोबाइल चार्ज गर्न नपाउँदा ब्याट्री चाँडै सकिने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले चलाएका मोबाइलमा केही ध्यान दिने हो भने लामो समयसम्म ब्याट्री टिकाउन सकिन्छ ।
तपाईले चलाउनुभएको मोबाइलमा यी कुरा ध्यान दिनुभयो भने माबाइलको ब्याट्री धेरै समयसम्म टिकाउन सकिन्छ ।
मोबाइलमा ब्राइटनेस अर्थात उज्यालोपन कम गर्नुहोस र चाहिएको बेला मात्र बढाउनुहोस । यस्तै मोबाइलको डिस्प्ले ब्याकलाइटलाई कम समयको बनाउने जस्तै ५ देखि १० सेकेन्ड । यसले गर्दा मोबाइलको स्क्रिन नचलेका बेला आँफै चाँडै निभ्छ र ब्याट्री बचाउँछ । तपाईले यदि आफ्नो मोबाइलमा लाइभ वालपेपर राख्नु भएको छ भने त्यसलाई बन्द गर्नुहोस् । लाइभ वालपेपर राम्रो त हुन्छ तर यसले पनि मोबाइलको धेरै ब्याट्री खान्छ । सकेसम्म कालो वालपेपर राखे राम्रो, किनकी यसले मोबाइलको कम पिक्सेल प्रयोग गर्ने भएकोले ब्याट्री पनि धेरै खर्च हुँदैन । भाइब्रेटरलाई अफ गर्दा र रिङको भोलुम सुन्न सकिने गरी सानो बनाउँदा पनि केही हदसम्म ब्याट्री जोगिन्छ । तर, भाइब्रेसन हटाउँदा तपाइले बोकिरहेको मोबाइलमा फोन आएको थाहा नहुने सम्भावना भने रहन्छ ।
मोबाइलमा ब्याट्री कम छ र छिटै चार्ज गर्ने सम्भाबना छैन भने म्युजिक प्लेयर, क्यामरा, इन्टरनेट जस्ता अनावश्यक फिचर नचलाउने । मोबाइलमा गीत सुन्दा वा फिल्म हेर्दा हेडसेट अर्थात एयरफोनको प्रयोग गर्ने । यसले गर्दा तपाइको मोबाइल स्पीकरमा भर पर्दैन र ब्याट्री जोगिन्छ । फेसबुकको नोटिफिकेशन तथा अरू नोटिफिकेशन बन्द गर्दा पनि केही मात्रामा ब्याट्री बचत हुन्छ ।
व्याकग्राउण्डमा चलिरहेका अनावश्यक एप्सलाई हटाउदा वा बन्द गर्दा पनि ब्याट्री लामो समय सम्म टिक्छ । काम सकिएपछि वाइफाइ, ब्लुटुथ, थ्रि जी, जिपिआरएस लगायत एप्लिकेशन बन्द गर्ने । नेटवर्क कमजोर भएको ठाउँबाट पूरा नेटवर्क भएको ठांउमा जाने वा कमजोर नेटवर्क भएको ठाउँमा मोबाइललाइ अफ गर्ने किनभने मोबाइलले नेटवोर्क खोज्नकै लागि पनि धेरैनै ब्याट्री खर्च हुने गर्छ । यदी फोन उठाउनु नपर्ने अवस्था जस्तो सुत्दा, मिटिङमा, गाडीमा रहँदा, फिल्म फोन अफ गर्न वा भाइब्रेटर अफ गरेर राख्नुहोस । सकेसम्म मोबाइलमा छोटो कुराकानी गर्नुहोस् । यो तरिका तपाईको मोबाइलको ब्याट्रिको आयु स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन तपाईको स्वास्थ्यलाई पनि लाभदायक हुन्छ ।
Posted by Becoming Kishor at 8:03 PM
No Comment to " मोबाइलमा ब्याट्रीको चार्ज नटिकेर हैरान हुनुभएको छ ? "
नयाँ शिक्षा ऐनले गरेको परिवर्तन र कार्यान्वयनको पा...
अमेरिका, रुस, स्पेन, फ्रान्सलगायत देशका सिकारी ढोर...
एएफसी यु–२३ च्याम्पियनसिपको छनोट खेलमा नेपाल समूह ...
नाबालकसहित दुई जनालाई कैद सजाय
निर्बाचन आयोग घेर्दै राप्रपा
कन्चनपुरमा एसएसबीद्वारा मारिएका गौतम माओवादी केन्द...
‘बाहुबली–२’ अप्रिल २८ मा
फिफाको नयाँ वरियताक्रममा नेपाल तीन स्थान सुधार्दै ...
ओलीको दाहाललाई सुझाव–वैशाखमा चुनाव गराउन नसक्ने भए...
जाजरकोट बस दुर्घटनाः ७ जनाको मृत्यु | बस भीरमा खस्...
नेपाली कांग्रेस फुट्यो , विपी पुत्रको नेतृत्वमा ने...
हलिउडकी चर्चित गायिका माइली साइरसको विवाहमा नेपालम...
एमालेको मेची–महाकाली अभियानको तयारी पूरा
सबैभन्दा बढि कमाउने संसारका ५ धनी फुटबल खेलाडी
नेपालको मनाङले हार्यो, मालदिभ्सबाट किरण चेम्जोङले ...
मोफसलको चर्चित तिलोत्तमा गोल्डकप फाल्गुन १२ देखि
मोबाइलमा ब्याट्रीको चार्ज नटिकेर हैरान हुनुभएको छ ...
झमक घिमिरेलाई मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधी
लुम्बिनीसँग जोड्ने सडक योजना निर्माण सुरु
गभर्नरका मुख्य दाबेदार चार जना
निर्वाचन आयोगमा फोरम नेपाल दर्ता, मधेसी मोर्चाभित्...
SWABIYU ELECTION UPDATE : ४४ क्याम्पसमा जितसहित क्...